Charlie – बाह्रथरी कुरा
वरिष्ठ टिप्पणिकार : १२ थरीमा यिनको बाइलाइन देखेरै थाहा पाइसक्नुभो होला, यिनी खरो स्वभावका छन्। टिपिकल गाउँले लवजमा बंगारामा हानेर पुक्लुक्कै ढलाउने क्षमता छ यिनमा तर आफ्नो क्षमतामा पटक्कै घमन्ड छैन। यिनी पहिला बंगारा झार्छन् अनि पछि ती झरेका बंगारा हेरेर ‘बंगारा पनि खासै राम्रा रैन’छन्, झार्दा पनि मज्जा आएन’ भनेर सान्त्वना दिन्छन्।
Continue Reading “जहाँ पुग्दैनन कवि, त्यहाँ पुग्छन् रवी” →
August 21, 2019 By Charlie बाह्र सत्ताईस कुराLeaveaComment
Continue Reading “हामी महापुरुष !!” →
April 12, 2019 By Charlie बाह्र सत्ताईस कुरा
Continue Reading “म *जी मर्द” →
February 6, 2018 By Charlie समाज, सामाजिक सञ्जाल बलात्कार, मर्द, मर्दाङ्गी, मानसिकताOne Comment
जय नेपाल साथीहरु ! फेरी घुम्दै फिर्दै हाम्रो टोल समाजमा चुनाव आइपुगेको छ। १२ थरीमा यसअघि एमालेलाई भोट किन दिने भन्नेबारे हाम्रा प्राविधिक प्रमुखले स्पष्ट कारण दिएका थिए। चुनावका मुखाँ यसरी एउटा मात्र पार्टीलाई भोट माग्नु ठीक नभएको निष्कर्ष सहित हामीले नेपाली कांग्रेसलाई पनि भोट माग्ने विचार गरेका छौं। हुनत यसअघि पनि भोट केमा दिने भनेर एउटा लामो लेख ठोकेकै हो। तैपनि २० वर्षपछि हुन लागेको चुनावमा चुपो लागेर बस्न नि त भएन नि हैन? नेपालको सबैभन्दा पुरानो, ऐतिहासिक (माने संग्रहालयमा राख्ने बेला भएको) पार्टीलाई भोट किन दिने भन्ने बारे व्याख्या गरौं- Continue Reading “भोट चैं रुखमा, नत्र भेटलाऊ मुखमा 🌳” →
May 2, 2017 By Charlie बाह्र सत्ताईस कुरा, राजनिती कांग्रेस, भोट, रुख2 Comments
खैर !!! केही समय पहिले ट्रम्प हिलारी र भुँइफुट्टा नेपाली भनेर हामीले वा मैले जस्ले लेखे पनि यहाँ छापिसकेका छौँ। हिलारीको पक्षमा पाखुरा सुर्केर लागेका नेपालीको हालत त रुझेको बिरालो जस्तो भाको तथ्य घाम झैं छर्लङ्ग छँदैछ । कसैलाई नलाको राजनीति नेपालीलाई लाग्ने हेर्नुस न । उहि क्या त…. केहि थान नेपाली र अमेरिकी-नेपाली पत्रकारहरुले चुनाव अघि नै ‘आगामी राष्ट्रपति हिलारी बस्ने घर’ भनेर ह्राइटहाउस अघि फोटो खिचाएर तहल्का मच्चाएको बिर्सनु भो ? त्यो फोटो हालेको एक साता नबित्दै हो कि क्या हो हिलारीको के के भो भन्ने त जगजाहेरै छ। भनेसी बुझ्नु भो भो नि…. नेपालीको जातले कतिसम्म पनौती लगाउन सक्ने रहेछन भनेर। अब तिनै पत्रकारहरु ट्रम्पलाई हटाउन मरिहत्ते गरेर लागेको देख्दा अर्को कार्यकाल नि ट्रम्पले नै लैजान्छन् कि जास्तो लाग्ने के 😂 Continue Reading “सुन साइलीऽऽ, निधारमा नाम्लो बरियो, ट्रम्पको सनकमा परियो ..” →
February 17, 2017 By Charlie बाह्र सत्ताईस कुरा, राजनिती अमेरिका, आप्रवासी, ट्रम्प, डर, नेपाली, शरणार्थीOne Comment
Continue Reading “हिलारी, ट्रम्प र भुइँफूट्टा नेपालीहरु” →
October 12, 2016 By Charlie बाह्र सत्ताईस कुरा, राजनिती, समाज3 Comments
अनि ति समातिएका डाउटर प्रति सहानुभूति राख्नेहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने गरेका आलुपाँडे तर्कहरु पढौँ आउनुस्। Continue Reading “डा. साप – सटिफिकेट देखाउनुस् न !!” →
June 21, 2016 By Charlie बाह्र सत्ताईस कुरा2 Comments
Continue Reading “हगाइ भन्दा पदाइ ठूलो !” →
April 13, 2016 By Charlie बाह्र सत्ताईस कुरा
Continue Reading “अम्रिकाका रुन्चे झ्याँस नेपाली” →
March 21, 2016 By Charlie बाह्र सत्ताईस कुरा अमेरिका, प्रवास13 Comments